Cheap Samsung Galaxy Rịba ama 10: nke a ga-abụ batrị nke Galaxy Note 10e | Gam akporosis
Ọ bụ ezie na ọnwa atọ ka fọdụrụ maka ọgbọ ọhụrụ nke njedebe dị elu site n'aka onye na-emepụta Korea iji hụ ìhè ụbọchị, nke nta nke nta anyị na-amụtakwu nkọwa banyere ụdị dị iche iche nke Samsung Galaxy Note 10. Na taa, anyị nwere ike ikwenye na ndụ batrị nke ụdị kachasị dị mfe. Kpachara anya, ọ ga-abata na nnwere onwe dị obere karịa ka anyị tụrụ anya ya.
Ọ bụ eziokwu doro anya na ụlọ ọrụ Seoul na-arụ ọrụ iwebata ụzọ anọ nke Samsung Galaxy Note 10. Dị ka ọ mere na Samsung Galaxy S10, onye na-emepụta Korea nwere atụmatụ yiri nke ahụ maka ọgbọ ọhụrụ nke ezinụlọ Cheta: ụdị 5G, nsụgharị vitamin abụọ dị elu na Samsung Galaxy Note 10 dị ọnụ ala.
Batrị nke Samsung Galaxy Note 10 ga-eru 3.400 mAh. O zuru ezu maka batrị gị?
Ma ọ bụ na, dị ka anyị nwee ike ịmata, dị ọnụ ala Samsung Galaxy Note 10, ikekwe Ihe ngosi 10e nke GalaxyỌ ga-enwe batrị 3.400 mAh. Kpachara anya, isi iyi nke iyi a bụ ụmụ okorobịa si Sammobile, yabụ anyị nwere ike inye akụkọ ahụ ntakịrị eziokwu. Ekwesiri icheta na Galaxy Note 9 ruru 4.000 mAh, ebe anyi nwere olile anya na ihe nlere kari nke vitaminized ga abata na batrị 4.500 mAh buru ibu iji kwado ihe ngwaike, karia ihe ngosi 6.7 nke ihuenyo ya.
Ọ ga-adị mkpa ịhụ ihe ụlọ ọrụ Korea na-eju anyị anya, n'ihi na ọ bụrụ na Samsung Galaxy Note 10 dị ọnụ ala batrị na batrị 3.400 mAh, anyị ekwenyeghị na ọ nwere nnukwu ihuenyo buru ibu maka oke ọ ga - abụ. Ọ ga-eru sentimita 6,3? Maka ndị ọzọ, a na-atụ anya na ọ ga-aga n'ihu na-achịkọta ngwaike kachasị mma n'ahịa. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-enwe Qualcomm Snapdragon 855 processor, yana 4 ma ọ bụ 6 GB nke RAM na nhazi nchekwa dị iche iche nke ga-esi na 64 GB gaa 256 GB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Anyị amatalarị batrị nke Samsung Galaxy Note 10 dị ọnụ ala ga-adị